Netflix, Disney +, Apple TV + uye Prime vhidhiyo: SVoD zviitiko zvinosvika muna Nyamavhuvhu 2020 - teles zvichidimbu
Netflix, Disney +, Apple TV + uye Prime vhidhiyo: SVoD novelties inosvika munaAugust 2020
By Chinde On Juil 27, 2020
Zhizha riri mukutenderera kuzere, uye vhidhiyo yezvinyorwa mapuratifomu zvinoita kunge urikumhanya wakadzikama kumhanya kweAugust uno
Mushure memwedzi yakaoma, uye zvakatonyanya kuoma kupasira nyika dzakawanda pasi rese, Netflix, Amazon, Apple uye Disney vari kubheja mwedzi uno pakudzoka kwechokwadi tsika uye humwe hunyowani hwenhema, kuzorora mamiriro ekunze. Asi mamiriro ekunze asina kugadzikana mune zvematongerwo enyika ari kuitawo kumapuratifomu ekuparadzira zvinyorwa zvinoburitsa pachena mamiriro ezvinhu epasirese.
Power Project - Netflix
Chii chingave chiri nani pane chipenga chinopfekwa naJamie Foxx kuzorora pamberi peTV? "Hapana», Inoratidzika kutipindura isu Netflix, iyo inoratidzira ne Project Simba firimu pakuvhiringidzwa kwemarudzi.
Kana piritsi isinganzwisisike ichipa vanhu vanoimisa zvisina mwero maspiritu anotanga kupaza pamusoro muNew Orleans, kopi (Joseh Gordon-Levitt) zvikwata zvichisvika nemutengesi wezvinodhaka (Dominique Fishback) uye muvhimi (Jamie Foxx) kuti adzokere kumusoro. mutserendende werudzi rutsva urwu rwechinodhaka.
Project Simba, inowanikwa paNetflix Nyamavhuvhu 14.
United States, Nyika Yekutamira - Netflix
Yakanyanya yezvematongerwo enyika uye yazvino script. United States, Nyika Yekutamira inounganidza makore matatu ekuferefetwa kwakaitwa nevakuru VaSaul Schwarz naChristina Clusiau vevakuru vezvekupinda nekubuda, mapurisa emumiganhu nevanodaidzira chinzvimbo cheU.S.
Munyika inozvibatanidzazve, pamusoro pehunhu, uye hope dzeAmerica dzakabviswa nehutongi hunotsigira "kutirwisa», Iyi rondedzero mumatanhatu episode inosimudza kuoneswa kweshungu kwemamiriro eAmerica. Pasina kukanganwa kuyeuka kuti iyo nyika yakavakirwa chaizvo pane zvakavakirwa siyana mavambo emapiyona ayo.
United States, Nyika Yekutamira, inowanikwa paNetflix Nyamavhuvhu 3.
Vakomana State - Apple TV +
Yakapihwa neiyo chaiyo A24, gwaro iri rakasainwa naJesse Moss naAmanda McBaine inotaura pfungwa chaiyo yegutsaruzhinji kuburikidza nehunyanzvi hwevashandi vechidiki veku Texan 1 avo, gore rega rega, vanokokwa kuvaka hurumende kubva papeji isina.
Makwikwi anopisa, kubva kwaari mumwe chete achabuda achikunda, uye achava mubati wenyika yake.
Rondedzero yakanyanya kupa mubairo wakaisvonaka kumutambo unokudzwa weSundance muUnited States.
Vakomana nyika, inowanikwa paApple TV + munaAugust 14.
Hoops (Mwaka 1) - Netflix
Munhepfenyuro inoyemurika yevakuru, murairidzi webhasikiti anozviona ari pamberi pechikwata chinotyisa chaanotambudza kuenda kumusoro. Imwe nzira yehunhu hwakaridzwa naJake Johnson (New Girl) kuwanazve kuzvivimba uye kudzora pamusoro pehupenyu hwake.
Hoops, mwaka 1 unowanikwa paNetflix Nyamavhuvhu 21.
Isingazungunuke Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend - Netflix
Mushure mekunonoka kushoma kwekusiya (chiitiko chacho chakatarisirwa May apfuura), chikamu ichi chinoshanda Bandersnatch inozvipa sechiwedzera kubatwa kune mafani emwaka mina yemutambo weTina Fey.
Pamusoro pegumi chitsva nekudzoka inoratidza munhu wese arikuona izvozvi paTV…
Iyo firimu rinotyisa rinotyisa iwe hauna kumbonzwa nezve rocketed up yeNetflix's…
Chati iyi inoratidza nei Netflix iri inonyanya kufarirwa kutepfenyura…
Isingazungunuke Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Reverend, inowanikwa Nyamavhuvhu 5 paNetflix.
Kunaya (Mwaka 3) - Netflix
Sokunge kuti itonhorere kubva kure kupisa kwezhizha, Netflix inopa danish yayo Mvura mwaka wekupedzisira muna Nyamavhuvhu.
Mushure memvura inonaya ichipedza vanhu vemuScandinavia, vakuru vaviri vechidiki vanopesana kuti ndeipi nzira yekutora kuti vavakezve munharaunda.
Mvura, mwaka wekupedzisira uripo paNetflix iri Nyamavhuvhu 6.
Kudurura zvitsva zvepakutanga zvemwedzi uno, Disney + ichawedzera wechitatu uye yekupedzisira gadziriso ye trilogy kune yayo kabhuku. Mbiri yaNarnia: Iyo Dawn Treader Odyssey.
Zvakadaro pane iyo dingindira yeakanakisa, Disney + ichaitawo mwaka mitatu yekutanga yemakesi Pane imwe nguva pachikuva chayo.
Mbiri yaNarnia, iro trilogy inowanikwa paDisney + paAugust 7th.
3% (Mwaka 4) - Netflix
pashure Mvura, ndomumwe mushamarari uyo Netflix ichasaina munaAugust. Mhando yeBrazil yekunakidzwa, iyo yaive nyaya yechinyorwa cheThe Screen Watch, ichauya kumagumo mumwaka wechina newekupedzisira.
3%, mwaka wekupedzisira unowanikwa paNetflix Nyamavhuvhu 14.
Biohackers (Mwaka 1) - Netflix
Munhepfenyuro itsva iyi yeGerman, mudzidzi wechidiki mutsoka dzemunhu anokonzeresa dambudziko remhuri yake anozviwana apinda muboka rinotsvaga kuzvitora kuna Mwari nekuita genetic test.
A pamwe yakabudirira techno-thriller kutora mafoto, ayo anoongorora misoro ine chekuita neBioethics.
Biohackers, mwaka 1 unowanikwa paNetflix Nyamavhuvhu 20.
Kukurumidza uye Kushatirwa 8 - Netflix
Chekupedzisira, sezvo isu zvimwe tisingakwanise kunakidzwa chero blockbuster mumatambo zhizha zhizha, Netflix iri kuwedzera kune yayo kiredhiti chikamu chakapusa chesaga. Kurumidza uye Furious.
Zvakwana kuti uongorore hunyanzvi hwako hwekuita musati wasimuka mushe pazororo.
Kurumidza uye Hasha 8, inowanikwa paNetflix Nyamavhuvhu 16.
Uye iwe, iyo firimu, nhaurwa kana zvinyorwa zvauri kutarisira zvakanyanya munaAugust 2020?
Chinde 302 Posts 0 mashoko
Switzerland: Jean-Pierre Nsamé anowana zvibodzwa zvake zve30 zvemwaka uye anofanidza rekodhi yeLigi
Tech: Iwo mana akanakisa processor mhando muna 4
Pamusoro pegumi nyowani uye inodzoka inoratidza munhu wese anotarisa iye zvino paTV neNetflix - BGR
Novelas: EL DIABLO EPISODE 69 MUFRENCH Ngirozi Inongoponeswa - Vhidhiyo
Iyo firimu rinotyisa rinotyisa iwe hauna kumbonzwa nezve rocketed up maNetflix's machati vhiki ino…
Novelas: DZESVONDO PARADISE EP 100 muFrench - Vhidhiyo